Izithunywa kancane esikhundleni ukuxhumana nomphakathi, abantu ukujwayela ukuxhumana kanye nokwaziswa exchange in a izicelo ezilula kanye neselula. Kuyinto funny, kodwa lezi zithunywa efanayo kancane kancane ephendukela ukuxhumana nomphakathi, ngezinye izikhathi zokweboleka izici kusuka esikhulu, amasevisi manje ogcwele kakhulu ezifana "VKontakte" futhi Facebook.
Izibonelo mass: WhatsApp ngokuya ligxilile ukuqopha ividiyo nesithombe, yocingo wethula microblogging kanye nekhono ukuthenga nohlelo, nokunye. Mina yayiphumula futhi umkhiqizo Line inkampani Chinese.
Mobile Isicelo Line - lena zakudala isithunywa, microblogging (njenge "Twitter"), isitoreji samafu (njenge eyinqolobane) futhi othile Analogue Instagram. Lokhu Frankenstein futhi kuzoxoxwa ngakho le nto.
Indlela ukulanda futhi uqale ukusebenzisa?
Njengoba kunjalo nge phi gijimi eziphambili (WhatsApp awubalwa), onjiniyela baye zinakekelwe ukudala amakhasimende kuzo zonke izingxenyekazi ekhona. Ngokwesibonelo, Line PC isicelo itholakala ukuhlukahluka ezintathu: ngoba MacOS (kwasakazwa Mac App Store),-Windows (kwi website esemthethweni ingalandwa) I-se-Google Chrome (kukhona azigcinele zokusebenza ze-Chrome). Isilayezi iklayenti for zobuchwepheshe mobile Apple ingatholakala AppStore. Isicelo Line for "Android" ingalandwa kusukela ezikhulwini zikahulumeni kuya esitolo Google Play noma ukuthola izikhala we-Inthanethi in the form of-APK-fayela.
Uma uqale uvule iwindi ayovulwa, ukunikela ukufinyelela. Kukhona ezimbili nje ongakhetha: ukungena inombolo yakhe yocingo bese uthola ikhodi yokuqinisekisa, noma ngena ngemvume profile yakho Facebook.
esibonakalayo Uhlelo sika sehlukaniswe amafasitela ezinhlanu eziseqhulwini:
Eyokuqala iwindi - ibhuku lamakheli.
Eyesibili iwindi - ingxoxo zamanje.
Okwesithathu Screen - tape ezivamile nezindaba.
Ibhokisi sesine - ukufinyelela audiozvonkam.
Owesihlanu iwindi - imenyu service.
Ku-window lokuqala zitholakala bonke oxhumana nabo. Phezulu - labo kakade kusungulwa Line nobani ungaqala ingxoxo lapha futhi manje. Ngezansi - bonke abanye kabani izinombolo une, kodwa usebenzisa Line. Uma uchofoza igama lomuntu siqu ukuze uvule iphrofayela yakhe siqu, lapho ungaqala yokuxhumana.
Iwindi yesibili uhlu izingxoxo ezisebenzayo. Akukho okukhethekile, wengxoxo banal. Azikho izinto ezingadingekile nezinqamuleli. Kungenzeka ukuthumela izitikha (okuyinto ngaphandle nabo 2017).
Ebhokisini wesithathu ungabona izindaba zakamuva othintana yabo nama-akhawunti olusemthethweni izinkampani ezahlukene kanye nezinkanyezi. Ngo leteyipu ngokurhaba ungaba imibono, amafayela, umculo, izithombe namavidiyo fresh. Usekela Umsebenzi nge tags kanye izinkomba ukusetshenziswa uphawu @ (inja). Bantfu bangahlangana emaqenjini nokuziphatha namabhulogi ngokuhlanganyela.
Iwindi lwesine ngokugcwele izingcingo ozinikele. Kusuka lapha ungabiza omunye kusuka oxhumene nabo ngokusebenzisa i Line.
Ku-window yesihlanu igxile wonke amasethingi, kanye nezixhumanisi applications angeziwe elihlobene ne-Line kanye nokuchibiyela ke.
Esikhathini imenyu service (ewindini lesihlanu) kukhona link ezimbili kuya ezitolo izitikha izingqikithi. Ngokuvamile, stikerpaki - cishe indlela kuphela ukwenza imali izithunywa. Isimo efanayo nasemkhakheni Line. Ikhathuni izinhlamvu, iqoqo izincwadi, amahlaya kanye nje ukukhuleka izimpawu yesimanjemanje manje wathumela esikhundleni umbhalo, kodwa kuyodingeka bakhokhe (okungenani kancane). Qaphela ukuthenga iqoqo izitikha, ufuna ukuthenga more and more.
Uma ufuna Line elengeziwe uqobo, kungenzeka ukuthola izindikimba esitolo. Kukhona themes eziningi ezibukwayo, kakhulu ekushintsheni indlela uhlelo ubukeka.
Njengoba e ezinye izithunywa eziningi Line kukhona iziteshi lemikhiqizo athandwa, izinkanyezi kanye nabezindaba Ubuntu. Lezi ziteshi zihlukaniswe ngezigaba ezahlukene, ezifana iziteshi esemthethweni Line, lapho ungafunda izindaba zakamuva mayelana izibuyekezo isicelo. Kukhona TV brand owaziwa ukudla okusheshayo, lapho SMM lezi zinkampani bhala mayelana zonke izinhlobo ukukhuphula kanye umthamo wemvula okunezinhlobonhlobo. Kukhona iziteshi izingubo ezitolo, ezitolo ezidayisa izincwadi nabanye. Abaculi silondoloze litfuba lekutentela abo emabhulogi okuyinto ukucoca ngalokho ohlela ukukwenza zabo, unikeze izixhumanisi okuthengiswayo nokubika amakhonsathi oluzayo emhlabeni wonke. Umklamo lezi namabhulogi akugcini imiyalezo, ezifana e-yocingo. Leli yikhasi ngokugcwele isakhiwo esiyingqayizivele, lapho ulwazi uvezwa ifomu digestible kakhulu. Amakhasimende ubhalisele brand nezinkanyezi, bayakwazi ukubamba iqhaza ezingxoxweni, besho yabo futhi awabelane nabangani babo. Njengakwamanye ukuxhumana nomphakathi futhi ethandwa izithunywa osheshayo.
Line developers banquma ukungayisebenzisi nhlobo ayeke gijimi futhi wadala izinhlelo eziningi ehlukile umphelelisi ke (bangakwazi usebenze ngokuhlukana, kodwa uboshelwe akhawunti Line).
Uhlelo sinjalo Umbuso B612. Lolu uhlelo lokusebenza ekhethekile esiza uhlela izithombe ozenze. Ideal for labo bathanda babiza ubuso izigqoko zakho, buso, kanye nezinye izimfanelo engavamile.
Kulabo othanda ukuyisebenzisa fancy izihlungi Instagram isitayela, kukhona Ikhamera lokusebenza Line. Ayikho into ngokuyinhloko entsha, asiyenzi, lolu hlelo lokusebenza esincane kakhulu sihluke ikhamera yefoni. Umahluko owokuthi ukuhlanganiswa namanye amasevisi Line.
Olunye uhlelo lokusebenza add-on - Gcina isitoreji amafayela. Lesi isikhala sakho siqu lapho ungathumela amafayela ahlukahlukene, kufaka phakathi umculo, amadokhumenti, amavoyisimeyili nokuningi. Ukuze kubuthwe lesi amafayela ukuthi kwathunyelwa kuwe Line, nalabo ozenze kuwe.
Line isicelo uthola ukuhlolwa ikakhulukazi omuhle kubasebenzisi. Isilinganiselwa kugcinwa at 4 amaphuzu kuzo zonke lokusebenza izitolo ethandwa. Abantu abafana ijubane gijimi lula yayo kanye isikhombikubona elula. abasebenzisi Happy futhi izihlwele, okuvumela ukuba nesineke phakathi izithunywa, uma udinga beveza othile ukuxhumana. Ngokuvamile, yebo, izicelo udumo namasevisi ahlobene Line, njengoba zikuvumela ehlukahlukene wengxoxo futhi wabe okuqukethwe ngendlela entsha. Kulaba minuses ihlaba umkhosi wokusebenza engazinzile kwamanye onobuhle egijima amafoni "Android" futhi uxhumano ezimbi ngenxa yamuva imikhawulo isithunywa umsebenzi ensimini ka WaseRussia.
Indlela ukuqeda ukuminyana acinene?
Aleksandr Aleksandrovich Bogdanov (Malinovsky): Biography, umsebenzi yesayensi
Phakathi nokubusa Nicholas 2. uNicholas II: Biography, ezombusazwe